linoo-ayar: ကျွန်ေတာ်သိသမှျ (၉) (သို့မဟုတ် ) Honda
ကျွန်ေတာ်သိသမှျ (၉) (သို့မဟုတ် ) Honda
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 9:33 AM ကျွန်ေတာ်သိသမှျ
မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်နှင့် သံဃာေတာ်များ၏ အင်တာနက်အသံုးြပုမှုအေြကာင်း ေြပာရင်းနှင့် မန္တေလးြမို့ အေြကာင်းေရာက်သွား၏။ မန္တေလးတွင် ကားထက် ဆိုင်ကယ်ကို Crazy ြဖစ်ြကေြကာင်း၊ ဆိုင်ကယ်ကို သိန်းရာေကျာ်ေနပါေစ ၀ယ်စီးေလ့ ရိှေြကာင်း၊ ေအာက်ဒိုးေတွအေြကာင်း၊ သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရးေတွအေြကာင်း၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအေြကာင်းေြပာြဖစ်ြကရာ Honda စက်ပစ္စည်း အေြကာင်း လည်းပါ၏။ ထိုမိတ်ေဆွမှာ Honda သည် ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်စက်ပစ္စည်းြဖစ်ေြကာင်းနှင့် အမျိုးအစားများကို တန်းစီေြပာနိုင်ေသာ်လည်း Honda ဆိုသည် ဘယ်ကစ၍ ဘယ်လိုေပါ်သည်ကို မသိေပ။ သို့နှင့် ဤေဆာင်းပါးကို ေရးရန် ြဖစ်လာခဲ့သည်။ သူတင်မဟုတ်၊ ယခုလက်ရိှ ေတာ်ေတာ်များများမှှာ Honda စက်ပစ္စည်းများကို အသံုးြပုေနေသာ်လည်း Honda ကို ဘာမှန်းမသိြကေပ။
ဟွန်ဒါဟူေသာအမည်ကို ကမ္ဘာေပါ်ရိှ လူတိုင်းလိုလို ြကားဖူးြကသည်၊သိြကသည်။ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ကားဟူ၍ လည်းေကာင်း၊ ဆိုင်ကယ်ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ ေရစုပ်စက်များဟူ၍ လည်းေကာင်း ေြပာြကေပမည်။ သို့ေသာ် Honda သည် လူတစ်ေယာက်၏ နာမည်ြဖစ်သည်ကို သိသူ နည်းပါးြက၏။
Gihei Honda နှင့် Mika တို့မှ ဆိုအိချိရိုဟွန်ဒါကို ၁၉၀၆ခုနှစ်၊ နို၀င်ဘာလ ၁၇ရက်ေန့တွင် ေမွးဖွားခဲ့သည်။ သားချင်းကိုးေယာက်တွင် အြကီးဆံုးသားြဖစ်သည်။ ၁၉၂၂ခုနှစ်တွင် စက်မှုေကျာင်းမှ ဘွဲ့ရရိှခဲ့သည်။ ထို့ေနာက် အလုပ်သင်အေနြဖင့် Art ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၇ တွင် ပစ်စတင်ကွင်းများကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ ရှီဇူအိုကာြပည်နယ်ဟာမာမတ်ဆုြမို့ရိှ ကုမ္ပဏီခပ်ြကီးြကီးတစ်ခုကို ဟွန်ဒါ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ဖူးသည်။ တိုကာအိေဆ့ကီအမည်ရိှ ထိုကုမ္ပဏီတွင် ၀န်ထမ်းနှစ်ေထာင်ခန့်ရိှသည်။ စစ်ြကီးြပီးေသာအခါ ဟွန်ဒါက ထိုကုမ္ပဏီကို ေရာင်းထုတ်လုိက်သည်။ထိုအချိန် ကာလက ဟာမာမတ်ဆုမှ တီထွင်ေရးသမား ဟူေသာနာမည်ြဖင့် ဟွန်ဒါမှာ ထင်ရှားေနေပြပီ။ စစ်ကာလအတွင်းတွင် သူ့ဉာဏ်စွမ်းကို စစ်ေလယာဉ်များ အတွက် ဒလက်များတီထွင်ထုတ်လုပ်ရာ၌ အသံုးြပုခဲ့ရသည်။ အစိုးရမှ စစ်ပစ္စည်းများ တီထွင်ထုတ်လုပ်ေရးဌာန အတွက် ဟွန်ဒါအား ကမ်းလှမ်းကာ ေခါင်ေဆာင်များ ချမှတ်ထားေသာ လမ်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ေပးခဲ့ရသည်။ ထို့ေြကာင့် ဟွန်ဒါအေနြဖင့် ြငင်းဆန်၍ မရခဲ့ေပ။
စစ်ြကီး ြပီးဆံုးသွားေသာအချိန်၌ ဂျပန်စစ်တပ်မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းြဖစ်သည့် ြကိုးမဲ့ေြကးနန်းစက်မှ ဂျင်နေရတာကို သံုးထားေသာ စက်တပ်ဘိုင်စကယ်ကို ပထမဦးဆံုး တီထွင်ခဲ့သည်။ အြခားေသာ တီထွင်မှု များစွာရိှခဲ့ေသာ်လည်း ဘီတပ်ယာဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စက်တပ်ဘိုင်စကယ်မှာ သူ၏ ပထမဦးဆံုး တီထွင်မှုပင် ြဖစ်သည်။
စက်ရံုအလုပ်သမားများနှင့်အတူ အလုပ်လုပ်ေနေသာ Honda
၁၉၄၈ တွင် Honda Motor Company ကို တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၃တွင် Benri Model J အမျိုးအစား ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ကို စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ မတ်လ(၂၀)ရက်ေန့တွင် ဟွန်ဒါမှ သူ၏ ကုမ္ပဏီ၀န်ထမ်းများအား ေြကြငာချက်တစ်ေစာင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ "သူ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ရိှ ေမာ်ေတာ်ကားအြမန်ေမာင်းြပိုင်ပွဲတွင် မိမိကုမ္ပဏီထုတ် ယာဉ်တစ်စင်းစင်းက ဗိုလ်ဆွဲနိုင်ေရးပင်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့ အဆင့်ြမင့်ယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ရန် အဆင့်ရိှသည်ဟု မိမိယံုြကည်ေြကာင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စက်မှုကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးြမှင့် တိုးတက်ေစရန် ၀န်ထမ်းများအေနြဖင့် ယခုထက်အစွမ်းကုန်ပိုမို ပူးေပါင်း ြကိုးစားြကရန်" ြဖစ်သည်ဟု ထုတ်ြပန်ခဲ့ေလသည်။
ထိုအချိန်က အဂင်္လန်နှင့်အိုင်ယာလန်ကမ်းေြခအလွန်ရိှ မင်းန်းကျွန်းေပါ်တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပေလ့ရိှေသာ တိုးရစ်ဖလားေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ြပိုင်ပွဲသည် အေတာ်ပင် မက်ေမာစရာ ေကာင်းလှ၏။ ထိုြပိုင်ပွဲကား အေမရိကနှင့် ဥေရာပ ထိပ်သီးကုမ္ပဏီများမှ အေကာင်းဆံုး ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်များ ၀င်ြပိုင်ြကေသာ ပွဲပင် ြဖစ်သည်။ ထုိသို့ ေြကြငာချက်ထုတ်ြပန်ြပီးေနာက်တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှာ ေငွေြကး အြကပ်အတည်းများြဖင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
ထို့ေနာက် တိုးရစ်ဖလားြပိုင်ပွဲ ြပိုင်ကွင်းကို ေလ့လာရန် အဂင်္လန်သို့ ဟွန်ဒါ သွားေရာက်သည်။ ြမင်လိုက်ရသည်က ဟွန်ဒါလုပ်ထားေသာ ကားအြမန်နှုန်းနှင့် လံုး၀လံုး၀ ကွာြခားေနေသာ ြမန်နှုန်းြမင့် ကားများြဖစ်ေနသည်။၊ ၎င်းြပိုင်ပွဲ၀င်ကားများမှာ တစ်မိနစ်လှျင် အပတ်ေရ တစ်ေသာင်းေကျာ်ြဖစ်ြပီး ဟွန်ဒါထုတ်လုပ်ေသာကားမှာ တစ်မိနစ်လှျင် အပတ်ေရ သံုးေထာင်သာ ရိှေလသည်။ သို့ေသာ် သူ အားမေလှျာ့ခဲ့။ သူလိုေနသည်က ေလယာဉ်ပံျအင်ဂျင်ေတွထက် ပါ၀ါနှစ်ဆရိှသည့် အင်ဂျင်ပင်။ ထို့အချိန်က တီထွင် ထုတ်လုပ်ရန် စက်အစိတ်ပိုင်းများ ဂျပန်ြပည်တွင်းတွင် ၀ယ်မရ၊ မရိှြကပါ။ သို့နှင့် ဟွန်ဒါ ဥေရာပသို့ ထွက်ကာ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ လိုက်လံ၀ယ်ယူရေလသည်။
သူလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့ေသာ် သူ၏အင်ဂျင်စက်နိှုးေသာအခါ မီးပွားများ များစွာထွက်ေနသည်၊ ထို့ေြကာင့်ပင် ဆိုနီေကာ်ပိုေရးရှင်းနှင့်တိုင်ပင်ကာ ဆိုနီမှ ထုတ်လုပ်ေသာ ထရန်စစ်စတာများကို အသံုးြပုရန် စဉ်းစားခဲ့ ေသးသည်။ သို့ေသာ် အသံုးမြပုခဲ့ပါ (ဆိုနီေကာ်ပုိေရးရှင်း တည်ေထာင်သူအေြကာင်းအား အလျဉ်းသင့်ပါက ေဆာင်းပါးတစ်ပုဒ်အြဖစ် ေရးသားပါဦးမည်။)။ ြပိုင်ပွဲ၀င်မည်ဟု ေြကညာြပီး ငါးနှစ်တာ ကာလေရာက်မှပင် ဟွန်ဒါ၏ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်သည် တိုးရစ်ဖလားသို့ ၀င်ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ခဲ့ရသည်။ သို့ေသာ် ဆုဖလားကား မရရိှခဲ့၊ ြပိုင်ပွဲ၀င် သံုးနှစ်တာကာလသို့ ေရာက်ေသာအခါ( ၁၉၆၁ ခုနှစ်)တွင် ဆုဖလားကို ရရိှပါေတာ့သည်။ ေအာင်ြမင်မှုကား အြခားသူများနှင့်မတူဘဲ ြပိုင်ပွဲအမျိုးအစားအားလံုးနီးပါးတွင် ဆုဖလားများအားလံုး ရရိှခဲ့ြခင်းပင်ြဖစ်သည် ။
ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်ေသာ ဆိုင်ကယ်များသည် ကမ္ဘာအနှံ့ ေရာင်းအားအေကာင်းဆံုးြဖစ်ခဲ့သည်။ ထုိမှျြဖင့် သူ၏ ရည်မှန်းချက်ကား မြပီးေသးပါ။ ထို့ေြကာင့်ပင် ဟွန်ဒါသည် ေလဘီးတပ်ယာဉ်များြဖင့် ြပိုင်ပွဲ၀င်ေရာက်ရန် စိုင်းြပင်းလာခဲ့သည်။ သို့ေသာ် ဂျပန်အစိုးရမှ ကန့်ကွက်မှုများ ရှုတ်ချမှုများ ဟွန်ဒါ့ကို ရာဇသံေပးကာ ေြပာြကားမှုမျိုးေတွ ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ဂျပန်အစိုးရသည် တိုယိုတာနှင့် နစ်ဆန်း ကုမ္ပဏီများကိုသာ ကားလုပ်ငန်း လုပ်ေစချင်ြပီး၊ ဟွန်ဒါ့အား ဂျပန်တွင် ကားလုပ်ငန်းအသစ်မလိုဟုပင် ေြပာဆိုခဲ့သည်။ ဟွန်ဒါ ဂရုမစိုက်ဘဲ သူ၏ အလုပ်ကိုသာ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ သူ၏ အြမင်နှင့် အစိုးရအြမင်များ ပဋိပက္ခ ြဖစ်လာခဲ့သည်။
ဤတွင် အစိုးရ ၀န်ြကီးဌာနများမှ ေနှာက်ယှက်မှုက မြပီးေသး၊ ကားအေရာင်များ ြခယ်သရာတွင်ပါ ၀င်ေရာက်စွက်ဖက်လာခဲ့သည်။ အဘယ်ေြကာင့်ဆိုေသာ် ဟွန်ဒါသည် သူ၏ကားများတွင် အနီေရာင်ကို စတင်အသံုးြပုမှုေြကာင့်ပင် ြဖစ်သည်။ ဟွန်ဒါမှ "ကျွန်ေတာ်တို့ ဂျပန်ြပည်ရဲ့ အချို့ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ်းေတွကို ချိုးေဖာက်သင့်ေနြပီ၊ ဒါမှ ဂျပန်ြပည် တိုးတက်မှာ"ဟု အစိုးရထံ ြပန်လည်ေချပ ေြပာြကားခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ေမလတွင် သူသည် ကူးပါးကလိုင်းမက် ဟုေခါ်ေသာ Formula 1 ကားတစ်စီးကို ၀ယ်ယူ၍ တစ်စစီြဖုတ်ကာ ေလ့လာခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ခုနှစ်တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီ၏ ပထမဦးဆံုး ေလးဘီးတပ်ယာဉ်ြဖစ်ေသာ HONDA S 500 မိုဒယ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ြပီး၊ ေဖာ်ြမူလာ၀မ်း Formula 1 ကားြပိုင်ပွဲသို့ ေနာက်နှစ်တွင် ၀င်ေရာက်မည်ဟု ေြကညာလိုက်ေလသည်။ ေြကညာချက်ထုတ်ြပီး တစ်နှစ်အြကာ ၊ ၁၉၆၅ခုနှစ် ၊ ေအာက်တိုဘာလတွင် မက်ဆီကို ကားြပိုင်ပွဲ္ပ၌ ပထမဆံုးအြကိမ်ဖလားရရိှခဲ့သည်။ ၁၉၇၂တွင် အေမရိက ေဈးကွက်တွင် Subaru နှင့် Mazda တို့ထက် သံုးဆမှျ ေရာင်းခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာတွင် Honda ကားနှင့် ပစ္စည်းများမှာ အြမင့်ဆံုးေဈးကွက်သို့ ေရာက်လာခဲ့သည်။
လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် အြမင်များ ကွဲလွဲလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ တွင် ဟွန်ဒါကုမ္ပဏီင်္၏ ဥက္ကဌအြဖစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့ြပီး အြကံေပးအေနြဖင့် ေနထုိင်ေလသည်။ ၁၉၇၉တွင် အိုဟိုင်းအိုတွင် စက်ရံုဖွင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ အသက်(၈၄)နှစ်တွင် တိုကျိုေဆးရံု၌ အသဲေရာဂါြဖင့် ကွယ်လွန်ေလသည်။ "ငါေသရင် င့ါအသုဘေြကာင့် ကားလမ်းေတွ မပိတ်မိေစနှင့်" ဟု မှာခဲ့သည့်အတုိင်း သူ့ဇာပနကို အကျယ်မချဲ့ပဲ ကျင်းပခဲ့ေလသည်။
13 Response to 'ကျွန်ေတာ်သိသမှျ (၉) (သို့မဟုတ် ) Honda'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235355154044#c1980265215299358318'> February 22, 2009 at 6:12 PM
အကိုေရ...မှျေ၀ေပးတာ ေကျးဇူးပဲဗျာ.. အရင်က ဟွန်ဒါဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး...
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235355154045#c7497028927917738338'> February 22, 2009 at 6:12 PM
ခုလို ရှင်းြပြပီး မှျေ၀ေပးတာ ေကျးဇူးပါရှင်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235356513145#c8874179031835036089'> February 22, 2009 at 6:35 PM
ဟွန်ဒါဆိုတာ ခုမှပဲေသချာသိေတာ့တယ် မှျေ၀ေပးတာေကျးဇူးပါ ကိုလင်းဦး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235356693787#c3554338379874942868'> February 22, 2009 at 6:38 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235365535419#c186855786610580316'> February 22, 2009 at 9:05 PM
အခုလို ပညာဗဟုသုတေလးေတွ မှျေ၀ေပးတာေကျးဇူးပါ။ တိုယိုတာ၊ နစ်ဆန်း လိုကားကုမ္ပဏီတည်ေထာင်သူေတွအေြကာင်းေတာ့ သုတစွယ်စံု စာအုပ်ေတွထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်၊ ဟွန်ဒါကိုေတာ့ မြကားဖူးဘူးဗျာ၊ အခုလို မှျေ၀ေပးတာ ေကျးဇူးအထူးပါ :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235368369190#c2885184559565105725'> February 22, 2009 at 9:52 PM
အကုိေရ မှျေ၀ေပးတာ ေကျးဇူး
အခုလို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်ေလးေတွဖတ်ရတာ ေကျးဇူးပါ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235384435553#c2856221352315090466'> February 23, 2009 at 2:20 AM
ဂျပန်ေခါင်းြကီးများ စက်မှုစီးပွားပိုင်း ဘာသာြပန်စာအုပ်မှာ ဖတ်ဖူးတယ်။
ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။ အေတာ် စံုစံုလင်လင် တင်ြပထားတယ်။ စုစည်းတင်ြပမှုကို အားကျမိပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235412568211#c9086648649643304030'> February 23, 2009 at 10:09 AM
ခုမှပဲ စံုစံုလင်လင် သိရတယ် ..
ခင်ဗျားလက်ကိုလည်း ဟွန်ဒါ ေမာ်တာတပ်ြပီးတီးဗျာ
ဒါမှ တီးကွက်ေတွပိုသွက်လာမှာ ရွာစားရ .. :P အေဟးေဟး
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235446168447#c7608907283538461712'> February 23, 2009 at 7:29 PM
ဒီေလာက် ဂဃနဏ မသိပါဘူး။
ရှယ်ေပးလို့ ေကျးဇူးပါအစ်ကုိေရ .. ..
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235449641967#c8708040227508865975'> February 23, 2009 at 8:27 PM
အခုလို ဟွန်ဒါ အေြကာင်းေဖာ်ြပေပးတာေကျးဇူးတင်ပါတယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235538952091#c3333262229436260833'> February 24, 2009 at 9:15 PM
ဗဟုသုတေလးေတွ ြပန်ြပီး မှျေ၀ေပးထားတဲ့အတွက်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1235539039943#c1993281764552794185'> February 24, 2009 at 9:17 PM
အေကာင့်နှစ်ခုထပ်သွားလို့ အေပါ်က apple အေကာင့်ကို ဖျက်လိုက်တာပါ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2009/02/honda.html?showComment=1237387628937#c7396506259500921066'> March 18, 2009 at 7:47 AM
ေကျးဇူးပါဗျာ. ေကာင်းမွန်ေသာ ဗဟုသုတ ရရှိေစတဲ့ ေနရာတိုင်းဟာ မဂင်္လာ ရိှတဲ့ အရပ် ပါ.
Don't get left behind. Sign up to receive the latest news.
Copyright 2009 Padd Solutions.
Masagana WP Theme is designed by Mobil X.
Converted to Blogger template by Abu Farhan